> Resource > Video > Sidee inuu ka soo kabsado Videos ka Sony Xperia Z
Casriga ah waa mid ka mid ah hal-abuurka ugu weyn ee qarniga 21aad. Waa maxay weyn oo ku saabsan casriga ah sida Xperia Sony ee Z waa in aad qabsan kartaa arrin kasta oo qaali ah in yar oo ka mid ah noloshaada dhex sawiro ama videos. Laakiin qalabka korantada ma aha hufan, iyo inta badan oo inaga mid ah ayaa hore u la kulmaan runta adag ee failure qalab laga badiyay badan oo dhan kuwa xusuus kuwaas oo si aan jecel nahay.
Halkii inkaar aad telefoon oo yareyso derbi ku dhacaya, i sii daa aan idin xaqiijiyo in videos aan la masixi u fiican, laakiin waxaa lagu kharribeen oo waxaa jira hab inuu ka soo kabsado iyaga.
Habka keliya ee lagu soo kabsado tirtiray videos ka Sony Xperia Z tusaale ahaan, waa in la isticmaalo software ah kabsaday sida Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) . Laakiin ka hor inta aadan sidaas samayn, waxaa jira u heshaan. Marka aad ku sugan tahay nooca in xaaladda, waa in aad u isticmaalin telefoonka, sababtoo ah wixii macluumaad cusub oo nooc kasta ee aad casriga overwrite laga yaabaa in aad u kharribmay videos iyo barta in, ma software in uu adduunka ahaan lahaa awoodaan inay ka bogsadaan videos aad tirtiray.
Dr.Fone for Android Waa sida mid ka mid fursadii ugu danbeysay inuu ka soo kabsado xogta aad badiyay aad casriga ah. Halkan, waxaan ku qaadato tusaale ahaan ka mid ah soo kabsaday videos tirtiray, laakiin Dr.Fone u android sii badan intii ku samayn kara, waxa badan soo kaban karto, wax walba oo aad smartphone. Dhammaan waxa aanu la akhriyo aad kaadhka xusuusta iyo SD smartphone (haddii aad leedahay mid) iyo kabsado xogta dhaawaca kombiyuutarka, oo sidaas daraaddeed ma aad yeelan doonaan in ay ka walwalsan tahay qalab aad. Dr.Fone for Android Waa in updates joogto ah si aad u soo qaado waayo-aragnimo user ugu fiicneyd abid.
Xilligan la joogo Dr.Fone for Android ka shaqeeyaa daaqadaha 8.1 (64 jajabkii) / 8 (32 & 64 jajabkii) / 7 (32 & 64 jajabkii) / Vista (32 & 64 jajabkii) iyo XP (32 & 64 jajabkii). Fadlan si xor ah isku day version maxkamada.
Fadlan ka raadi hoose talaabada by tilmaamaha tallaabo inuu ka soo kabsado tirtiray / photos lumay aad ka Sony Xperia Z
(Fiiro gaar ah: Waxaa inta badan hab-isku mid ah wixii xog ah ka soo kabsanaya ee aad casriga Android)
Bareesada-in aad Sony Xperia Z si aad u computer Windows isticmaalaya dongle USB iyo bilowdo software Dr.Fone for Android. Marka sawirka hoos ka muuqda ilaa Dr.Fone, fadlan riix bilowga button.
Sug Dr.Fone u android inuu sameeyo shuqulkiisa iyo dayactiro aad u kharribmay videos.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray videos on Sony Xperia Z
Haddii aad rabto in aad soo kabsadaan oo dhan ee aad videos, hubi in sanduuqa videos waxaa sax (berdaha. 1) guji soo kabsado (berdaha ahaa. 2). Haddii aad rabto in aad ku eegaan aad videos dooro ah videos gaar ah in aad rabto in aad soo kabsado, fadlan sax sanduuqa ku xiga videos aad rabto in aad soo kabsado (berdaha ahaa. 3) iyo guji soo kabsado (2 berde.)